Giriigga oo joojinaya Qaxootiga dib loogu Celinayo Turkiga isagoo balan-qaad sameeyay
HomeWararka CaalamkaGiriigga oo joojinaya Qaxootiga dib loogu Celinayo Turkiga isagoo balan-qaad sameeyay
October 9, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska, Warka ugu akhriska badan 0
Greece ayaa sheegay Jimcihii maanta inay baari doonto wararka sheegaya in qaar ka mid ah Muhaajiriinta si sharci darro ah dib loogu celiyo xadka, maalin kadib markii Brussels ay ku cadaadisay inay eegto eedeymaha.
Dhowr warbaahin oo reer Yurub ah ayaa toddobaadkan baahiyay in mas’uuliyiinta Giriigga iyo Croatia ay si sharci -darro ah mararka qaarkood si xoog leh u celiyaan muhaajiriinta. Madaxa fulinta ee Midowga Yurub ayaa ku baaqay in baaritaan la sameeyo Khamiista.
Wasiirka socdaalka Giriigga Notis Mitarachi ayaa sheegay Jimcihii inuu u sheegay madaxa arrimaha gudaha ee Midowga Yurub Ylva Johansson in sheegashooyinka la baari doono.
“Sheegasho kasta oo la sameeyo waxaa baaraya garsoorka iyo hantidhawrkayaga gudaha,” ayuu u sheegay wariyeyaasha kulan Midowga Yurub oo ka dhacay Luxembourg.
Johansson ayaa mar sii horreysay sheegtay in Croatia ay ballanqaadday inay baareyso eedeymaha waxayna iyadu si cad ugu sheegtay Giriigga in loo baahan yahay inay sidaas oo kale sameyso.
Waxay sheegtay in dalalka Midowga Yurub looga baahan yahay inay ilaaliyaan xuduudaha dibadda ee ururka, laakiin sidoo kale ay tahay inay ilaaliyaan qiyamka, sarraynta sharciga iyo xuquuqda aasaasiga ah.
Sida uu dhigayo sharciga caalamiga ah, muhaajiriintu waxay xaq u leeyihiin inay codsadaan magangalyo waana mamnuuc in dib loogu celiyo magangalyo-doonka halkii uu kasoo tagay
Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Croatia, Davor Bozinovic, ayaa sheegay Khamiista boolisku inay samayn doonaan baaritaan. Wuxuu intaas ku daray in booliska xudduudaha Croatia ay u dhaqmeen si waafaqsan sharciga oo aysan u dulqaadanayn ku -takrifal awoodeed.